Ny overcast dia havaozina amin'ny alàlan'ny fanavaozana kely ny sehatr'ilay mpampiasa sy fampidirana fampiasa vaovao | Vaovao IPhone
Ny overcast dia havaozina amin'ny alàlan'ny fanavaozana kely ny sehatr'ilay mpampiasa sy fampidirana fiasa vaovao
Ao amin'ny App Store isika izao dia afaka mahita rindranasa marobe izay mamela antsika hankafy ny podcast ankafizintsika nefa tsy mila mampiasa ilay rindran-tany. Ireo rindranasa ireo dia manolotra fiasa mahaliana tsy misy amin'ny rindranasa noforonin'i Apple, noho izany dia manana elanelana ho an'ireo mpampiasa mihaino an'ity karazana raki-peo ity saika isan'andro. Vao nahazo fanavaozana vaovao ny Overcast Nanavao ny interface interface, nanatsara ny fiasa sy ireo fiasa natolony anay hatreto.
Hanombohana azy, ny kisary dia nohavaozina kely tamin'ny fanesorana ilay alokaloka izay nananany tany aoriana mba hifanarahana, na dia bebe kokoa aza amin'ny takian'ny Apple amin'ity lafiny ity. Manolotra antsika koa izy io widget vaovao izay ahafahantsika mifehy ny playback of podcast. Ny fijerena peek & pop dia misy ihany koa amin'ity fanavaozana ity, mampiseho aminay ny topy maso podcast manokana. Amin'ny fihodinana miankavanana, ao amin'ny lisitry ny podcast miandry ny fihainoana, dia hahita fanaraha-maso feo sy hafainganana vaovao isika, fanitsiana izay hita tao anaty podcast tsirairay avy teo aloha
Marco Arment, mpamorona Overcast ary mpamorona Instapaper, Ny rafitra fidiram-bola azonao amin'ny fampiasana an'ity fampiharana ity dia niova indray. Tamin'ny taon-dasa, nisafidy ny hampihatra rafi-pialokalofana an-tsitrapo izy, izay ahafahan'ny mpampiasa mandoa raha hitany fa tokony hampiasa ilay rindranasa, rindranasa tsy misy karazana doka. Fotoana fohy taorian'izay dia nanomboka naneho doka tamin'ny mpampiasa rehetra izay tsy nisafidy an'ity rafitra ity. Miaraka amin'ity fanavaozana vaovao ity dia misafidy ny rafitra doka indray i Arment hahafahany mampiasa maimaim-poana ilay fampiharana, doka izay azontsika esorina raha mamaky ilay boaty ary mandoa 9,99 euro isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny overcast dia havaozina amin'ny alàlan'ny fanavaozana kely ny sehatr'ilay mpampiasa sy fampidirana fiasa vaovao
2018 no taona nofidian'ny Apple hanokatra ny Apple Store voalohany any Arzantina
Wiseplay dia nohavaozina manampy fanatsarana manan-danja